Ukunyuka kweNtengiso eNgenayo | Martech Zone
Abantu IPamorama Ndenze umsebenzi owoyikisayo ngale kwi-infographic enika ukuqonda ukuba kutheni intengiso engenayo sesona sicwangciso siphezulu ngokuchaseneyo nentengiso ephumayo… ngokwembono yomthengi.
Njengoko abathengi beqhubeka nokuthontelana kwi-Intanethi, ishishini lokuthengisa nge-Intanethi liyaqhubeka nokuvela. Kwiindlela ezimbini ezinje nge-Intanethi, iimodeli zesiko lokuthengisa ziyaphulukana nokusebenza kwazo, kwaye iintlobo ezintsha zentengiso zifumana umphunga ngokubonelela ngexabiso kubathengi ngokuya bekhutshelwa ziindlela zorhwebo ezingathandekiyo.
Ngelixa iinzame ezingenayo zifuna ukuzibophelela kunye nexesha lokwakha umfutho, akukho zindleko zisebenzayo zokufumana abathengi abakhulu abathenga imveliso okanye inkonzo yakho.
tags: urhwebo inboundAmanani entengisoukuthengisa okungaphandlea ngafuni
Ukufikelela kubafundi beKholeji?
Ukukhula kweNkonzo yaBathengi yaBantu
Jul 5, 2012 ngo-8: 28 PM
Le infographic enkulu. Ndivumelana ngokupheleleyo nawe xa usitsho
Ulwazi olufumaneka ngokulula kubathengi ngoku lunokwenza ukuphuma
Ukuthengisa kuya kuqhubeka ukwehla. Ingenayo
Ukuthengisa kunokuba kubi kwabanye, kodwa ngokuqinisekileyo kuxhobisa abathengi.